Amabha ukuhlela izinto zasekhishini ngokwezomnotho | Bezzia
Amabha wokuhlela ngokwezomnotho izitsha zasekhishini
E-Bezzia sizama ukwabelana nawe ngemibono yokuhlela ikhaya lakho. Abanye kunjalo elula futhi engabizi njengaleli ebesiliphakamise ngesonto eledlule, uyalikhumbula? Indawo yokubeka ijazi Kwabe sekuba ukhiye wokuhlela amakamelo ahlukene ekhaya lethu, kubandakanya nekhishi.
Futhi ngendlela efanayo naleyo ebesisebenzisa ngayo umugqa wejazi hlela izitsha zasekhishini, singasebenzisa ibha yensimbi ngokuhlangana nezingwegwe zenyama njengoba aziwa kakhulu. Lapho sinendawo encane yokugcina ekhishini, ngiyakuqinisekisa ukuthi lokhu kuyinhlanganisela engu-10.
1 Izinzuzo zemigoqo yensimbi
2 Izinhlobo zemigoqo yensimbi
2.1 Ngokusho kobuhle bayo
Izinzuzo zemigoqo yensimbi
Kwesinye isikhathi okulula kakhulu yilokho okusebenza kahle kakhulu. Imigoqo yensimbi isetshenziswe iminyaka kulabo abane indawo yokugcina enganele ukubeka zonke izinto. Futhi akuqondananga, izinzuzo zalesi sesekeli ziningi.
Ziyisixazululo sokonga. Asikukhohlisi lapho sikutshela ukuthi ungathola imigoqo yensimbi engamasentimitha angama-40 enezingwegwe ezi-6 emakethe nge- € 9. Intengo ebiza kakhulu ngomsebenzi abawufezayo, awuvumi?
Zingabekwa ezindaweni ezahlukene. Amabha angabekwa odongeni, amiswe eshalofini noma emnyango wamakhabethe ukuze kukhuliswe isikhala sokugcina kuwo.
Kwabo bonke. Izingwegwe zababulali zikuvumela ukuba ulengise zonke izinhlobo zezitsha kule mizigo: amabhodwe, amapani, izinkezo, izindwangu ... Kuzodingeka babe nembobo yalokhu. Iningi linalo kepha kufanele ubheke lapho uzithenga.
Iyahlukahluka. Amabha ensimbi angena kuzo zonke izinhlobo zamakhishi, noma ngabe uma ukhetha ungakhetha ukwakheka nokunye ukuqeda. Okuthandwa kakhulu ukuqedwa kwe-matte ngombala omnyama kuthi okusansimbi ngamathoni egolide nethusi.
Izinhlobo zemigoqo yensimbi
Emakethe uzothola izinhlobo ezahlukene zensimbi esingazihlukanisa ngamaqembu ahlukene, ziholwa uhlelo lwazo lokulungisa kanye nokuqeda kwazo. Mayelana ne- uhlelo lokulungisa ezimbili ezinye izindlela:
Amabha anamathelayo: Emakethe kunemiklamo eminingi yokuzinamathisela ekuvumela ukuthi ulungise imigoqo odongeni ngaphandle kokwenza imbobo kuyo. Zinezinto ezinamathelayo ezingabamba kuze kufike ku-10 kg .; Singazisebenzisa ukulengisa okusika ngokhuni, izindwangu ... Azikwazi ukulungiswa, kepha, kuzo zonke izindawo. Gwema ukuwasebenzisa ezindongeni ezidwetshiwe, ngephepha lodonga, izindonga ezimhlophe noma ezinye izindawo ezibushelelezi noma ezingalingani,
Imigoqo eboshiwe: Lezi zinhlobo zemigoqo zisiphoqa ukuba senze izimbobo ezithile ngaphezulu kepha ngokubuyisela zisinika ukumelana okukhulu. Inqobo nje uma sizilungisa endaweni eqinile futhi ezinzile, singayisebenzisa ukuhlela zonke izinhlobo zezitsha. Izikulufu azihlali ziza nebha; qiniseka ukuthi uthenga i-hardware elungile.
Ngokusho kobuhle bayo
Uma sikhuluma nge ubuciko bobuciko, izinketho ziyanda. Njengoba sesishilo, lezo ezisensimbi zithandwa kakhulu futhi zisebenza izinto eziningi. Zilingana nazo zonke izinhlobo zamakhishi yize kulawo ane-aesthetics yesimanje neyesimanje zisebenza kahle kakhulu kubuhle bazo obucwebezelayo nobupholishiwe.
Kodwa-ke, uma sifuna ukunikeza ukuthinta okukhethekile ekhishini futhi sibanake, imigoqo yensimbi nge igolide noma ithusi sekugcineni ziyindlela enhle kakhulu. Singazithola emakhishini wesitayela sakudala, wevintage noma wezimboni kudeshibhodi, ukufaka esikhundleni noma njengomphelelisi wamakhabethe aphezulu.
Futhi i- mnyama ngokuqedwa kwe-matte? Zikulungele ukuhlobisa amakhishi amnyama amancane namhlophe amancane kanye namakhishi e-rustic. Ekugcineni uzobathola bebekwa kuthayela omhlophe odongeni njengesitoreji samabhodwe, amapani nensimbi nezitsha zensimbi.
Kuzoba lula kakhulu ukuthola izinsimbi zokulengisa izinto ekhishini lakho. Uzobathola ngamanani ashibhile kakhulu e-Ikea, e-Amazon noma eLeroy Merlin. Uma ufuna enye indlela ekhetheke kakhulu, ungaphinda useshe ku- izitolo zokuhlobisa online noma kulabo abakhethekile ekuhlelweni kwekhaya. Ukusesha okuku-inthanethi kunganele ukuthola okulungele izidingo zakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Ukupheka » Amabha wokuhlela ngokwezomnotho izitsha zasekhishini
Ukubukeka kwama-Oscars 2020
I-mousse yetshokholethi esisekelweni esiphundu ne-orange